चिनियाँ राजदुत यान्छीको रातदिन दौडधुप एमसीसी फेल हुने निश्चित ! – Points Nepal
चिनियाँ राजदुत यान्छीको रातदिन दौडधुप एमसीसी फेल हुने निश्चित !
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २२, २०७८ समय: ११:३०:५८
काठमाडौँ । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाएर चुनावमा लैजान सक्रिय देखिएको छ । २०७४ सालमा चीनकै प्रयासमा वामगठबन्धन भएको थियो र अपेक्षित मतसमेत प्राप्त भएको थियो ।
त्यही इतिहास दोहोर्याउन चीन लागिपरेको छ । स्वयं चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङले नेपालको कम्युनिस्ट एकतामा चासो प्रकट गर्ने गरेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी)का विदेश विभाग प्रमुख सुङ थाओबीच यिनै विषयमा माघ १६ गते भिडियो वार्ता भएको थियो ।
अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी)का बारेमा दुई नेताबीच कुराकानी भएको थियो । नेपालको राजनीतिमा वाम शक्तिको महत्त्वपूर्ण र उपस्थिति रहेको भन्दै सुङ थाओले नेकपा एमालेसँग मिलेर निर्वाचन लड्ने सम्भावना कति छ भनेर प्रचण्डलाई सोधेका थिए ।
जवाफमा प्रचण्डले भने ओली पश्चिमा शक्तिहरूको इशारामा चलेकाले तत्काल एकता हुन गाह्रो रहेको बताए ।
चिनियाँ नेताहरूले नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसँग पनि निरन्तर भिडियो वार्ता गर्ने गरेका छन् । एमाले स्रोतले भन्यो, ‘कम्युनिस्ट शक्ति भएकाले निरन्तर कुराकानी भइरहेको हुन्छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, यसलाई अघि लैजाने विषय, कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीचको एकता जस्ता विषयहरूमा कुराकानी भएको छ ।’
नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी पनि यतिबेला सक्रिय बनेकी छन् । उनले गोप्य रूपमा भेटघाट तीव्र बनाएकी हुन् ।
एमसीसीलाई लिएर युरोप, अष्ट्रेलियाका राजदूतहरू पनि सक्रिय भएको अवस्थामा चीनले पनि आफ्नो सक्रियता बढाएको छ ।
बुधवार एक सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमालेका नेता महेश बस्नेतले ओलीसँग वार्ता गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले दूतहरू पठाउने गरेको खुलासा गरेका थिए ।
एमसीसी र निर्वाचनलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनमै मतभेद भएको अवस्थामा यसअघि एउटै दलको अभ्यास गरिसकेका नेताहरूबीच भएको कुराकानीलाई अर्थपूर्ण रूपले हेरिएको छ ।
कम्युनिस्टहरू मिल्ने भय प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत छ । त्यसैले उनले गठबन्धन नतोड्न हरसम्भव प्रयाससमेत गरिरहेका छन् ।
कथंकदाचित गठबन्धन तोडिएमा यसअघि जस्तै ओली, प्रचण्ड र नेपाल मिलेर चुनाव लड्ने सम्भावनालाई देउवाले निकै नजिकबाट हेरिरहेका छन् ।
एमालेकै कतिपय नेताहरूले पुनः वाम गठबन्धन बन्ने सम्भावनालाई नकार्दैनन । यद्यपी अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनलाई कुनै हालतमा तोड्ने या कमजोर बनाउने उनीहरूको रणनीति अन्तर्गत यस्तो मिडियाबाजी पनि भइरहेको चर्चा चलेको छ ।
नेपालको राजनीतिमा दक्षिणी छिमेकी भारत र पश्चिमी छिमेकी युरोप र अमेरिकाको प्रभाव चिनियाँ प्रभाव भन्दा बढी छ ।
तर पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग भगिनी सम्बन्ध रहेको भनिएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी निरन्तर संवादमा देखिन्छ । नेकपा सत्तामा रहँदा नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको विज्ञहरूले बताउने गरेका थिए ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकजुट बनाउने चिनियाँ प्रयास कायम छ तर पछिल्लो अवस्था हेर्दा ओली, प्रचण्ड र नेपालबीच तत्काल कुनै सहमति हुन सक्ने देखिन्न ।
ओली एमसीसीलाई निशर्त अघि बढाउने पक्षमा छन् भने प्रचण्ड र नेपाल यथास्थितिमा एमसीसी संसदबाट पास हुनै नसक्ने अडानमा छन् ।
अमेरिकी सहायता परियोजना भएकाले एमसीसीमा चीनको चासो स्वाभाविक हो । चीन९नेपालबीच यसअघि नै सम्झौता भएको बीआरआईलाई अघि बढाउन कांग्रेस र एमाले दुवैको सरकारले चासो दिएको थिएन ।दैनिक न्युज नेपाल बाट
Last Updated on: February 5th, 2022 at 11:30 am